विचार तथा संवेदना के हो ? ~ विज्ञान संसार
विचार तथा संवेदना के हो ?
Posted by Om Bhandari On 1:13 PM
विचार तथा संवेदना एक प्रकारको विद्युतीय प्रक्रिया
हो जुन स्नायु कोषहरुको फिजियोलोजिकल प्रोसेस फलस्वरुप सृजना हुन्छ । यो कसरी उत्पन्न हुन्छ ? यो उत्पन्न हुने प्रक्रिया के हो ? यी प्रश्नहरु थाहा पाउन निम्न विषयमा जानकारीहरु हासिल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
विचार तथा संवेदना मस्तिष्कको एक केन्द्र सेरीब्रल कोर्टेक्स
को विद्युतीय सक्रियता
मा निर्भर गर्दछ ।
मा छरिएका आयोन ९क्ष्यल० हरुका कारणले जीवित वस्तुहरुमा उत्पन्न हुने विद्युतीय तरंग
अर्थात् एक्सन पोटोन्सियल सृजना हुन्छ । जसका कारणले जैब विद्युत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बग्छ । यी जैब विद्युतको कारणले नै स्नायु
हरुमा बग्ने विद्युत चार्ज (जसलाई
पनि भनिन्छ) लाई सञ्चालन गर्दछ ।
उपरोक्त चार्ज एउटा न्यूरोन (स्नायु कोष) बाट अर्को न्यूरोनमा जानलाई दुई न्यूरोन बीचको रिक्त स्थान भएर जान्छ र उक्त खाली ठाउँमा एक रासायनिक संदेशवाहक
हुन्छ जसलाई स्नायुविक संदेशवाहक
पनि भनिन्छ । यी संदेशवाहकले विद्युतीय संकेतलाई एउटा न्यूरोनबाट अर्को न्यूरोनमा स्थानान्तरण गरिरहन्छ र गरिरहन्छ जसको फलस्वरुप विचार तथा संवेदना उत्पन्न हुन्छ ।
हरुले सेरीब्रल कोर्टेक्समा यस्तो तन्त्रिका जाल पत्ता लगाएका छन् जसले मनको गुण र भावना, क्रोध, सुख, दुख, सन्तोष, प्रसन्नता र निराशाको सृजना तथा नियन्त्रित गर्दछ । साथै उपरोक्त तन्त्रिका जालमा विद्युतीय उत्तेजना
गराई कृत्रिम तरिकाबाट पनि उक्त भावनाहरु मस्तिष्कमा पैदा गर्न सकिन्छ । विशेषज्ञहरुले यी तन्त्रिकाको जाललाई
भनी नामाकरण गरेका छन् । यो भाग न्यूरोन
हरु मिलेर बनेको हुन्छ । यो त्यही तन्त्र हो जसले कर्मेन्द्रियद्वारा प्राप्त बाह्य जगतका अनुभवलाई चेतना
वा संवेदनामा परिणत गरी मस्तिष्कमा सञ्चार गर्दछ ।
यो जाल तन्त्रमा उत्तेजना, रीस, कृत्रिम निन्द्रा उत्पन्न गर्न सकिन्छ । वैज्ञानिकहरुले शल्यक्रियाद्वारा जालको तन्त्रलाई मस्तिष्कमा प्रतिस्थापन गरी विद्युत
प्रवेश गर्ने विधि पत्ता लगाईसकेका छन् । जसको फलस्वरुप कृत्रिम निन्द्रा लगाउन सकिने भएको छ ।
संकल्प शक्ति इच्छा शक्ति
जस्तै एउटा न्यूरोनमा मात्र उत्पन्न हुन्छ जुन मस्तिष्कको प्रभावद्वारा एक न्यूरोनबाट दस न्यूरोनसम्म प्रसारण हुन्छ । यही प्रकारले १० बाट १०० र १०० बाट १० गुणाका दरले विद्युतीय क्षेत्र
बढ्दै जान्छ । जब इच्छा शक्तिले १० लाख न्यूरोनहरुलाई प्रभावित गर्दछ तब संकल्प शक्ति बन्दछ । यदि हामी १० लाख न्यूरोनलाई आफ्नो संकल्प शक्तिद्वारा प्रभावित गर्दछौं भने हाम्रो मस्तिष्क तथा शरीरले त्यही काम गर्दछ जुन हामी चाहन्छौं । कुनै कार्य गर्न वा रोक्न न्यूरोनको आवृत्ति
२-५० साइकल प्रति सेकेण्ड हुनु पर्छ ।
(Physiological Condition of the Brain)
जब मान्छे आँखा बन्द गरेर शान्त मुद्रामा हुन्छ तब उसको मस्तिष्कले प्रसारण गर्ने विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग अल्फा तरङ्ग हुन्छ जसको आवृत्ति ८-१२ साइकल प्रति सेकेण्ड हुन्छ । जब मान्छे स्वप्नावस्थामा हुन्छ तब उसको मस्तिष्कले "बीटा" वा "गामा" विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग प्रसारण गर्छ भने जब मान्छे निन्द्रावस्थामा हुन्छ तब उसको मस्तिष्कले उच्च आवृत्ति
वाला डेल्टा विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग प्रसारण गर्दछ ।
(Memory - Power)
सेरीब्रल कोर्टेक्स नै सोचाइको केन्द्र भएको हुनाले यसमा भएको विद्युतीय सक्रियता
नै वास्तवमा मस्तिष्कको स्मरण शक्ति हो । किनभने जति ज्यादा यसको विद्युतीय सक्रियता बढ्दछ त्यति नै ज्यादा चुम्बकीय क्षेत्र सृजना भई धेरै सूचना तथा जानकारीहरुलाई चुम्बकीय शक्तिको रुपमा संरक्षण हुन्छ र स्मरण शक्ति बनिरहन्छ
स्मरण शक्ति विषयमा रासायनिक सिद्धान्त
(Chemical Theory of Memory Power)
यो सिद्धान्त परीक्षणबाट प्रमाणित भएको हुनाले सर्वमान्य तथा सर्वोपरी छ । यो परीक्षणलाई सत्य सावित गर्ने वैज्ञानिक डा. हेडेन हुन् । डा. हेडेनको सिद्धान्त अनुसार जब मस्तिष्कमा रहेका न्यूरोनले संवेदनालाई ग्रहण गर्दछ तब धेरै परिवर्तन आउँछ जसको प्रभाव
अणु तथा यसबाट बनिने प्रोटीन अणुहरुमा पर्दछ । साथै उपरोक्त जैविक अणुहरुको आणविक बनावटमा परिवर्तन आउँछ । डा. हेडेनको अनुसार
तथा प्रोटीनको परिवर्तित अणुहरु उपस्थित भए सम्म
स्मरण शक्ति पनि बनिरहन्छ । यो विषयमा उनले एउटा मुसामा परीक्षण गरे । परीक्षणको दौरानमा उनले मुसालाई भोजन प्राप्त गर्न एउटा छडमा चढ्न सिकाए । परीक्षणको दौरानमा मुसालाई आफ्नो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नु थियो । केही समयपछि मुसाले भोजन प्राप्त गर्न छडमा चढ्ने तरिका सिक्यो । छडमा चढ्न सिकेको मुसाको मस्तिष्कको न्यूरोनले उनले जाँच गरी यो कुरा पत्ता लगाए कि न्यूरोनमा आर.एन.ए. वा काइवोन्यूक्लिक एसिडको मात्रा बढ्यो साथै उक्त अणुमा रहेको चार बेसको अनुपात पनि एक आपसमा परिवर्तन भयो । उक्त परीक्षणबाट डा. हेडेन यो निष्कर्षमा पुगे कि RNA अणुले आफ्नो बेसको अनुपातमा सानो परिवर्तन आउनासाथ एउटा नयाँ अणु बनाउँदछ जुन नयाँ अणुमा बाहिरी संसारको अनुभव संग्रहण हुन्छ र यस प्रकार स्मरण शक्ति बनिरहन्छ ।
- विजय अधिकारी ( बिज्ञानलेखमालामार्फत)
Categories: मस्तिष्क, विचार, शक्ति